Ciyaartoy iyo madaxweynihii kooxda oo ku dhintay shil diyaaradeed | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Ciyaartoy iyo madaxweynihii kooxda oo ku dhintay shil diyaaradeed
Ciyaartoy iyo madaxweynihii kooxda oo ku dhintay shil diyaaradeed
Posted by: Ahmed Haaddi January 25, 2021
Himilo – Afar ciyaartoy iyo madaxweynaha kooxda kubbadda cagta ee reer Brazil ee Palmas ayaa ku dhintay shil diyaaradeed Axaddii. Kooxdu waxay u safraysay si ka duwan kooxda inteeda kale ka dib markii laga helay cudurka coronavirus, kooxda ayaa sidaas sheegtay.
Diyaaradii khaaska ahayd ee siday kooxda ayaa dhulka ku dhacday dhamaadka wadada ay wax ka dhaceen waxyar uun ka dib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee waqooyiga gobolka Tocantins. Duuliyaha oo lagu magacaabi jiray Wagner ayaa sidoo kale shilka ku dhintay, iyadoo aan wali la cadeyn sababta shilka keentay.
Kooxda ayaa ku sii jeeday gobolka dhexe ee Goiânia si ay ciyaar Copa Verde ah ula ciyaaraan Vila Nova. Dhibbanayaasha waxaa loo aqoonsaday inay yihiin madaxweynaha naadiga, Lucas Meira, iyo ciyaartoyda Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule iyo Marcus Molinari. Ma jirin wax badbaaday oo saarnaa.
Ciyaartoydu way wada safrayeen maxaa yeelay waxay noqdeen positive cudurka Covid-19, afhayeenka kooxda Izabela Martins ayaa tiri. Martins ayaa sheegtay in axadda ay noqon laheyd maalintii ugu dambeysay ee karantiilka kooxda inteeda kala, oo ka ciyaarta heerka afraad ee kubada cagta Brazil.
Kooxda Chapecoense, oo ah kooxdii 19 ciyaartoy ku wayday shil diyaaradeed oo ka dhacay Colombia sanadkii 2016, ayaa soo saartay bayaan ay ku taageerayso. “Nasiib darro, waan ognahay sida xilligan xanuunka u eg yahay waxaana rajeynaynaa inaysan koox kale dareemin wax la mid ah,” ayay Chapecoense ku tiri hadal ay soo saartay.Tan keligaa ma mari doontid.
Previous: Engineer soo saaray App awooda inuu tarjumo codadka bisadaha!
Next: Maqal- Barnaamijka Aqoon-kaal